Bingeing Rats - ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလုပ်အလွန်အကျွံလုပ်ဆောင်မှုပုံစံတစ်ခုလား။ (2006) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
သည်အထိ Bingeing: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလွန်အကျွံအပြုအမူ၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်? (2006)
မှတ်ချက်များ - ဤစာတမ်းအရအငွေ့သည်ကြွက်များသည်အကျင့်နှင့်ဓာတုနှစ်မျိုးလုံး၏စွဲလမ်းမှုအတွက်စံနမူနာကောင်းဖြစ်သည်။ ကြွက်များကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဇယားဖြင့်အမှန်တကယ်အရသာရှိသည့်အစာကိုကျွေးမွေးခြင်းသည်အလွန်အကံျွပြုခြင်းကိုအားပေးသည်။ ဤအငွေ့ပျံနေသောကြွက်များ၏ ဦး နှောက်ကိုလေ့လာခြင်းသည်လူတို့အတွက်စွဲလမ်းနေသည့် neurobiology ကိုဖော်ပြသည်။
အပြည့်အဝလေ့လာမှု: သည်အထိ Bingeing: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလွန်အကျွံအပြုအမူ၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်?
အစာစားချင်စိတ်။ 2006 ဇန်နဝါရီ; 46 (1): 11-15 ။
2005 စက်တင်ဘာ 26 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.appet.2004.09.002
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလွန်အကျွံအပြုအမူတွေ (IEB) မူးရူးစား, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, အရက်, ထစ်အငေါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလောင်းကစားအပါအဝင်အမျိုးမျိုးလူ့မမှန်သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ လက်တွေ့ Co-ရောဂါ IEB ကြားတွင်တည်ရှိများနှင့်ကန့်သတ်ကုသမှုကိုရှေးခယျြစရာရရှိနိုင်ပါသည်။ Bing နှင့်အခြားနို့တိုက်ကျွေးရေး protocol များ၏အမူအကျင့်မော်ဒယ်များများအသုံးပြုမှု IEB အစားအစာရယူနှင့်စားသုံးဆီသို့ညွှန်ကြားနှင့် IEB အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများရယူနှင့်စားသုံးဆီသို့ညွှန်ကြားအကြားတည်ရှိနေကြောင်းအာရုံကြောတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုရှင်းလင်းဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကန့်သတ် access ကိုမူးရူး-type အမျိုးအစားစား protocol ကို အသုံးပြု. ဒီဓာတ်ခွဲခန်းကနေသုတေသန IEB သို့သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုငျသညျ။
keywords: Bing စား, ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားလုပ်မှု, အပြုအမူမော်ဒယ်များ
အရက်သေစာသောက်စားခြင်း၊ လိင်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းများအပါအ ၀ င်လူ့ရောဂါများကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြန့်ပြန့်အပြုအမူများကဖော်ပြသည်။ ဤအပြုအမူများသည်ရောဂါတိုးပွားလာခြင်းနှင့်သေဆုံးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်း၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောဆိုးကျိုးများရှိသော်လည်းထိန်းသိမ်းထားသည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အစားအသောက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချရန်အထူးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြင့်အပြုအမူပိုလျှံမှု၏ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်စဉ်များ၏ neurobiological အခြေခံကိုနားလည်ရန်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ချက်သည်အပြုအမူတစ်မျိုး (ဥပမာအစာကျွေးခြင်း) ၏ neurobiological အထောက်အပံ့များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသည်အခြားအပြုအမူများ (ဥပမာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု) အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။ ဤသည်ရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက်ထိရောက်သောနိုင်အသစ်ကုထုံးကြားဝင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြေခံပေးလိမ့်မယ်။ မကြာသေးမီကအစီရင်ခံစာများကမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းတို့ပါဝင်သောရောဂါများကိုဆေးဝါးကုသမှုတွင်တိုးတက်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြသော်လည်း၊ ကုသမှုနည်းလမ်းများမှာအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိနေပြီး၊ Halmi, Agras, Mitchell က, Wilson က, Crow အဘိဓါန်များနှင့် Bryson, 2002; Kreek, LaForge, & Butelman, 2002; Safer, Lively, Telch, & Agras, 2002; Zhu & Walsh, 2002).
လူသားမြားသညျတှငျ, IEB အစားအစာဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးမူးရူးစားခြင်းဖြင့်ကိုယ်စားပြုနေသည်စားသုံးဆီသို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ Bing စားအရှိဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းဆင်တူအခြေအနေများအောက်တွင်စားထက်ပိုမိုကြောင်းတစ်ခုငွေပမာဏအတွက်အချိန်အတိုချုပ်ကာလအတွက်အစားအစာများ၏ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း overconsumption ပါဝငျသညျ။ အဆိုပါမူးရူးသို့မဟုတ်မ may ထိုကဲ့သို့သော ( 'စဉ်အတွင်း'), အစာရှောင်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်အလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ခန်းအန်အဖြစ်အစားထိုးအပြုအမူတွေအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နိုင်ပါသည်။ (ထို Bing-ဆက်စပ်အစာစားခြင်းမမှန်မှုများအတွက်, Bing အချိန်ကြာရှည်စွာကျော်မကြာခဏဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း၏ဆုံးရှုံးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲတစ်အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်DSM-IV, 1994).
Bing သည်အခြား IEB နှင့်အတူရှယ်ယာ comorbidity အစာစားခြင်း။ ဥပမာ, လူနာမူးရူး၏အမြင့်ဆုံးနှုန်းအစာစားခြင်းအရက်နှင့်ကင်းအလွဲသုံးစားမှုအတွေ့အကြုံအတွက်ကုသမှုရှာကြံ (ဂျွန်ဆင်, Spitzer, ဝီလျံ, ရွန်ကီ, Linzer နှင့် Brody, 1997; Wilson က, 1993), နှင့် Bing-ဆက်စပ်အစာစားခြင်းမမှန်မှုများအဘို့အကုသမှုရှာကြံလူဦးရေ (ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, အထူးသဖြင့်အရက်နှင့်ကင်းမြင့်မားမှုနှုန်းကိုတွေ့ကြုံခံစားBrewerton, Lydiard, Herzog, Brotman, အိုနေးလ်နှင့် Ballenger, 1995; Bulik, Sullivan က, & Kendler, 2002; Bushnell et al ။ , 1994; Herzog et al ။ , 1992; Laessle, Wittchen, Fichter, & Pirke, 1989; Wiederman & Pryor, 1996) ။ မူးရူးစားခြင်းနှင့်လောင်းကစားအကြားတစ်ဦးကကြားဆက်ဆံရေးကိုလည်း (အစီရင်ခံထားသည်Engwall, Hunter, & Steinberg, 2004).
IEB တို့တွင် comorbidity ကဤအပြုအမူဖြန်ဖြေယန္တရားများထပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ IEB ဖွံ့ဖြိုးရေး, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် relapse ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုပြောင်းလဲဆန်းစစ်ရန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော IEB အတန်းအကြားတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုနှိုင်းယှဉ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်သဘာဝကဆုလာဘ်အသုံးချဖို့ protocols များထပ်တလဲလဲ, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, maladaptive အပြုအမူပိုလျှံ (ဥပမာထပ်တလဲလဲ bingeing) သို့အသွင်ပြောင်းကြောင့်သည့်အခါရံဖန်ရံခါပုံမှန်အမူအကျင့်ပိုလျှံ (ဥပမာရံဖန်ရံခါ bingeing) ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအပြောင်းအလဲများထုတ်ဖေါ်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အထူးစိတျဝငျစားနေကြသည်။ မူးရူး-type အမျိုးအစားစားအတော်ကြာအပြုအမူမော်ဒယ်များ (မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြရာ, အဆိုပြုကြပြီCorwin & Buda-Levin, 2004) ။ ဤအများနှင့်အခြား protocol များ၏အသုံးပြုမှုကို IEB အကြားတည်ရှိနေကြောင်းအာရုံကြောတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုရှင်းလင်းဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်အစားအစာဆီသို့ညွှန်ကြားနှင့် IEB, (ဥပမာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဆီသို့ညွှန်ကြား Bello, Sweigart, Lakoski, Norgren, & Hajnal, 2003; DeSousa, Bush, & Vaccarino, 2000; di Chiara, 2002; Gosnell, 2000; Grigson, 2002; Hagan & မော့စ်, 1991; ကယ်လီ & Berridge, 2002; Schroeder, Binzak, & Kelley, 2001; Spangler, Wittkowski, Goddard, Avena, Hoebel နှင့် Leibowitz, 2004).
Bingeing ကြွက်များနှင့် IEB
အဆိုပါကန့်သတ် access ကို protocol ကို
ဒီဓာတ်ခွဲခန်းကနေသုတေသနအစားအစာ-ဆင်းရဲချို့တဲ့သူနဲ့ဆက်စပ်အလားအလာရှက်ကြောက် minimize နိုင်ရန်အတွက်, စွမ်းအင်ကန့်သတ်မလိုအပ်ပါဘူးမူးရူး-type အမျိုးအစားစားတဲ့အမူအကျင့်မော်ဒယ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဆီသို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးအာဟာရပြည့်စုံဓာတ်ခွဲခန်း Chow နှင့်ရေကျွန်တော်တို့ရဲ့ protocol ကိုအားလုံးကိုအချိန်များတွင်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ မူးရူး-type အမျိုးအစားစားသွေးဆောင်ရန်, ဓါတ်အဆီ (hydrogenated ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတိုကောက်) ၏တစ်ဦး optional ကိုအရင်းအမြစ်ကန့်သတ် access ကိုပေးအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသန (က, အတိုကောက်လျှောက်လျော့နည်းဖို့လက်လှမ်းသကဲ့သို့, 2-ဇန့်အသတ် access ကိုကာလအတွင်းအတိုကောက်တိုး၏စားသုံးမှုကြောင့်ပြသခဲ့သည်Corwin, 2004; Corwin, Wojnicki, Fisher သည် Dimitri, ဆန်နှင့်လူငယ်တို့, 1998; Dimitriou, ဆန်, & Corwin, 2000; သောမတ်စ်, ဆန်, Weinstock, & Corwin, 2002) ။ ကြွက်သာ2ဇများအတွက်တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်သည့်အတိုကောက်သုံးခွင့်ရှိသည်သောအခါ, 2-ဇ access ကိုကာလအတွင်းစားသုံးမှုအတိုကောက်ဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူကြွက် 24 ဇအတွက်လောင်အရာကိုညီမျှဆိုလိုသည်မှာအလွန်မြင့်မားသည်။ ဤအခြီးမွှောကျစားသုံးမှုထူထောင်အကြောင်းကို4ရက်သတ္တပတ်ကြာပါသည်။ ထူထောင်တစ်ချိန်ကသို့သော်ယင်းအပြုအမူကိုအလွယ်တကူထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤသည် protocol ကိုအချိန်တိုးချဲ့ကာလအဘို့ထိန်းသိမ်းထားနိုင် IEB ထူထောင်တစ်အတော်လေးရိုးရှင်းပြီးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့နည်းလမ်းပေးပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ် (ကြှနျုပျတို့ကြွက်၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲများနှင့်အသက်အရွယ်မရွေးအတွက်သရုပ်ပြသည်အတိုင်းကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါသည်သောမတ်စ် et al ။ , 2002), အဖြစ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက် (Corwin et al ။ , 1998; Dimitri et al ။ , 2000).
အပတ်တိုင်းမွန်, Weds, Fri (MWF) ရက်နေ့တွင်2ဇများအတွက်တိုမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူကြွက်ဟာမူးရူးဇာတ်လမ်းတွဲအောက်ပါ 22 ဇအတွက်မူးရူးနေစဉ်အတွင်းကိုလောင်ပိုလျှံစွမ်းအင်များအတွက်လျော်ကြေးပေးကြပါဘူး။ ဒါက 2-ဇမူးရူးနေစဉ်အတွင်းအလွန်အကျွံစားသုံးမှုဟာမူးရူးနေ့၌သိသိသာသာ 24-ဇ overconsumption ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲ Non-မူးရူးရက်ပေါင်းတွင်, သို့သော်, 24-ဇစွမ်းအင်စားသုံးမှုလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးမူးရူး / လျော်ကြေးပေးအပြုအမူပုံစံကိုသူတို့အစားအစာဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှနေကြသည်သော်လည်း, ထို MWF ကြွက်များတွင်ဖွံ့ဖြိုး; အဆိုပါအတိုကောက်သာသူတို့ရဲ့ access ကိုကန့်သတ်သည်။ အဆိုပါ MWF ကြွက်များတွင်အစားအစာစားသုံးမှု၏ပုံစံနေ့စဉ် 2-ဇတို access ကိုအချိန်ဇယားအပေါ်ထိန်းသိမ်းထားကြွက်၏ထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ သူတို့အားကြွက်များတွင်နေ့စဉ် 24-ဇအစားအစာစားသုံးမှုအများဆုံးရက် Chow သာထိန်းချုပ်မှုကနေကွာခြားပါဘူး။
လူသားတို့ကိုလောင်မူးရူးအစားအစာများကိုပုံမှန်အား DSM-IV (ထိုကဲ့သို့သောမုန်နှင့်အချိုပွဲအဖြစ်ကန့်သတ် '' တားမြစ်ထား '' High-အဆီပစ္စည်းများထားရှိရေးကြောင့်ကန့်သတ် access ကို protocol ကိုအတွက် bingeing တစ်ဦးဦးစားပေးအဆင့်မြင့်အဆီအစားအစာမှဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို, သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည် ; Guertin, 1999; Hadigan, Kissileff, & Walsh, 1989; ကိုက်လန်, 1990; ရို, Leitenberg, စုစုပေါင်း & Willmuth, 1986) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရေစာအစားအစာများကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ် (ကထိန်းချုပ်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်း setting ကို၎င်းတို့၏နောက်ဆက်တွဲစားသုံးမှုတိုးပွါးFisher & Birch, 1999) ။ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၏မရှိခြင်းအတွက်အစာစားသညျလူသားတို့အတွက် Bing နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်အဖြစ်ကန့်သတ် access ကို protocol ကိုပေါ်ကြွက်အစားအစာ-ဆုံးရှုံးမဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ် (Marcus & Kalarchian, 2003) ။ ကန့်သတ် access ကို protocol ကိုအပေါ်တိရစ္ဆာန်များ၏အမူအကျင့်, ထို့နောက်လူ့အစားအစာစားသုံးမှုမှဆက်စပ်မှုရှိပြီး, Bing-ဆက်စပ်အစာစားခြင်းမမှန်ခံစားနေရပြီးလူသားကြောင်းအချို့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဆင်တူသည်။
အဆီစားသုံးမှုကိုထိန်းညှိကြောင်း Peptides ကန့်သတ်လက်လှမ်းအခြေအနေများအောက်တွင်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲများမှာ
တိုက်ရိုက် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယသို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါ Non-မူးရူး protocols များမှာတော့ galanin (ဖက်တီးအစားအစာစားသုံးမှုကိုလှုံ့ဆျောCorwin, Robinson, & Crawley, 1993; Kyrkouli, Stanley, Seirafi, & Leibowitz, 1990), နှင့် galanin ရန် M40 (အဆီစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေLeibowitz & Kim က, 1992) ။ သို့သော်ကန့်သတ်လက်လှမ်းအခြေအနေများအောက်တွင်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမ galanin မဟုတ်သလို M40 (အဆီစားသုံးမှုထိခိုက်Corwin, Rowe, & Crawley, 1995) ။ (အလားတူရလာဒ်များ, enterostatin နှင့်အတူရယူခဲ့ကြသည်တစ် neuropeptide အဆီ-mediated မွတ်မပြေနိုင်သောအထောက်အကူပြုဖို့ထင်Erlanson-Albertsson & York, 1997) ။ အကြောင်း, ကန့်သတ်လက်လှမ်းအခြေအနေများအောက်တွင်, enterostatin (ဖက်တီးအစားအစာစားသုံးမှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်Corwin & Rice, 1998; ဆန် & Corwin, 1996, 1998) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကန့်သတ်လက်လှမ်းအခြေအနေများအောက်တွင်အဆီစားသုံးမှု၏ neurobiology သည်အခြားအခြေအနေများအောက်တွင်အဆီစားသုံးမှု၏ neurobiology ထံမှကွဲပြားခြားနားကြောင်းဖော်ပြသည်။
ကန့်သတ် access ကိုအားဖြင့်သွေးဆောင် Bing ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆင်တူစေခြင်းငှါ
မကြာသေးမှီကလေ့လာမှုများကန့်သတ် access ကိုများနှင့်အခြား IEB, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအားဖြင့်သွေးဆောင်အဆီစားသုံးမှုအကြားအလားအလာတူညီစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စတင်ပါပြီ။ အခြားအုပ်စုများအနေဖြင့်အစီရင်ခံစာများကို (ဂါဘမြို့သား-B က agonist baclofen တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေကြောင်းပြသကြFattore, Cossu, Martellotta, & Fratta, 2002; Janak & Gill, 2003; Ranaldi & Poeggel, 2002; Brebner, Phelan, & Roberts သည်, 2002 ကိုလည်းကြည့်ပါ; ဝမ်းကွဲ, ရောဘတ်, & က de Wit, 2002, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့), နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခို (များ၏ကုသမှုဆေးပညာဂတိတော်ကိုပြတော်မူပြီAddolorato, Caputo, Capristo, Domenicali, ဘားနှင့် Janiri, 2002; Assadi, Radgoodarzi, & Ahmadi-Abhari, 2003; Shoptaw ယန်, Rotheram-Fuller, Hsieh က, Kintaudi နှင့် Charuvastra, 2003; ကိုလညျးရှု Brebner et al ။ , 2002; ဝမ်းကွဲ et al ။ , 2002, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်) ။ ဒီဓာတ်ခွဲခန်းကနေမကြာသေးမှီကဒေတာ (baclofen high-အဆီအစားအစာသို့မဟုတ် Chow ၏စားသုံးမှုလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲကန့်သတ် access ကိုအားဖြင့်သွေးဆောင်အဆီမူးရူး-type အမျိုးအစားစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေကြောင်းညွှန်ပြBuda-Levin, Wojnicki, & Corwin, 2005) ။ ဤ (Bing နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုရှယ်ယာလက်တွေ့ comorbidity ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်Brewerton et al ။ , 1995; Bulik et al ။ , 2002; Bushnell et al ။ , 1994; Herzog et al ။ , 1992; ဂျွန်ဆင် et al ။ , 1997; Laessle et al ။ , 1989; Wiederman & Pryor, 1996; Wilson က, 1993) နှင့် baclofen ယေဘုယျအားဖြင့် (မအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်သို့မဟုတ် Non-မူးရူးတိရိစ္ဆာန် protocols များအတွက်အစားအစာစားသုံးမှုတိုးပွါးBrebner et al ။ , 2000; Ebenezer, 1995; ပဲ့တင်သံ, Lamonte, Ackerman, & Bodnar, 2002; Higgs & ဘာဘာ, 2004; Minano, Meneres Sancho, Sancibrian, Salinas, & Myers, 1992; Stratford & ကယ်လီ, 1997; ရပ်ကွက်, Somerville, & Clifton, 2000; Wirtshafter, Stratford, & Pitzer, 1993; Znamensky,: Echo, Lamonte, ခရစ်ယာန်, Ragnauth နှင့် Bodnar, 2001) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤတွေ့ရှိချက်အာရုံကြောအချက်ပြမူးရူး-type အမျိုးအစားစားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအကြံပြုသည်ကန့်သတ် access ကို protocol ကိုအတွက်လုပ်ပါတယ်အဖြစ်, Non-မူးရူးစား၏ထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ အဲဒီအစား, Bing ၏ IEB မှသက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောအချက်ပြပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု၏ IEB တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတို့နှင့်အတူ aligned နိုင်ပါသည်။
အမူအကျင့်ပိုလျှံ၏ထပ်ခါတလဲလဲ, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, ဇာတ်လမ်းတွဲများ၏ neurobiology ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်သက်သေအထောက်အထားဆုံဘုံယန္တရားများအပြုအမူ၏ဤအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မမှန်အထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒီဓာတ်ခွဲခန်းကနေသုတေသနအတိုကောက်ဖို့ကန့်သတ် access ကို Non-အစားအစာ-ဆုံးရှုံးကြွက်များတွင်တို၏ထပ်ခါတလဲလဲ, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, အလွန်အကျွံစားသုံးမှုသွေးဆောင်နိုင်သည်ကိုပြသထားသည်။ အဆိုပါ protocol ကိုအတော်လေးရိုးရှင်းပြီးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အပြုအမူလူ့ Bing အချို့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဆင်တူသည်။ မကြာမီကဒေတာကိုကန့်သတ် access ကိုမူးရူး-type အမျိုးအစားအခြေအနေများအောက်တွင်အာရုံကြောအချက်ပြ Non-မူးရူးအခြေအနေများထံမှကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ထို့ထက် ပို. နီးကပ်စွာပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူ aligned စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် IEB မြားတှငျပါဝငျခွငျး၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်ကြောင်းဇီဝကမ္မနှင့်အာရုံကြောကိုပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးဖို့အသုံးပြုနိုင်တိုက်ကျွေး protocols များအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့အပြုအမူသည်ဤမကြာခဏအဖျက်ပုံစံများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် relapse အထောက်အကူပြုကြောင်းယန္တရားများ elucidate မှလျှင်ထိုသို့သောသုတေသနအရေးကြီးသည်။
ဂျူလိုင်လ ၁၈ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၊ Hueston Woods Resort, Ingestive အပြုအမူလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်း (SSIB) Satellite Symposium ကိုတင်ပြသည်။ Allan Geliebter နှင့် Harry R. Kissileff တို့ကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဂြိုဟ်တုအားနယူးယောက်အဝလွန်ခြင်းသုတေသနဌာန၊ SSIB၊ General Mills Foods၊ McNeil Nutritionals, Ortho-McNeil ဆေးဝါး၊ Procter & Gamble တို့ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
Addolorato, G, Caputo က F, Capristo အီး, Domenicali M က, ဘားက M, Janiri L ကို, et al ။ အရက်တဏှာနှင့်စားသုံးမှုလျှော့ချအတွက် Baclofen ထိရောက်မှု: တစ်ဦးကပဏာမနှစ်ဆမျက်စိကန်းထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှု randomized ။ အရက်နှင့်အရက်။ 2002; 37: 504-508 ။ [PubMed]
Assadi သည် SM, Radgoodarzi R ကို, Ahmadi-Abhari လုပ် SA ။ ကျပန်းကို double-မျက်စိကန်းသောရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု: opioid မှီခို၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုသမှုများအတွက် Baclofen ။ BMC စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 3: 16 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bello NT, Sweigart KL, Lakoski JM, Norgren R ကို, Hajnal အေကန့်သတ်ကြွက် dopamine ပို့ဆောင်ရေးတစ်ခု upregulation အတွက်စီစဉ်ထား sucrose access ကိုရလဒ်များကိုနှင့်အတူအစာကျွေး။ အမေရိကန်ဇီဝကမ္မဗေဒ၏ဂျာနယ် (စည်းမျဉ်း Integrated နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဇီဝကမ္မဗေဒ) 2003; 284: R1260-R1268 ။ [PubMed]
Brebner K ကို Childress AR, Roberts သည် DCS ။ ဂါဘမြို့သားများအတွက်အလားအလာအခန်းကဏ္ဍB psychostimulant စွဲများ၏ကုသမှု agonists ။ အရက်နှင့်အရက်။ 2002; 37: 478-484 ။ [PubMed]
Brebner K ကို Phelan R ကို, Roberts သည် DCS ။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA baclofen အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuates ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2000; 66: 857-862 ။ [PubMed]
Brewerton TD, Lydiard RB, Herzog DB, Brotman AW, အိုနေးလ် pm တွင်, Ballenger JC ။ bulimia nervosa အတွက်ဝင်ရိုးကျွန်မစိတ်ရောဂါမမှန်၏ Comorbidity ။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 1995; 56: 77-80 ။ [PubMed]
Buda-Levin တစ်ဦးက, Wojnicki FH, Corwin RL ။ Baclofen မူးရူး-type အမျိုးအစားအခြေအနေများအောက်တွင်အဆီစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2005 စက်တင်ဘာ 1; [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bulik CM, Sullivan က PF, Kendler KS ။ မူးရူးစားနှင့်မပါဘဲအဝလွန်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ရောဂါရောဂါ။ စား Disorders အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 2002; 32: 72-78 ။ [PubMed]
Bushnell ဂျာဝဲလ် je, McKenzie JM, Hornblow AR, Oakley-Browne, MA, Joyce PR စနစ်။ အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်နှင့်ဆေးခန်းများတွင် Bulimia comorbidity ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ။ 1994; 24: 605-611 ။ [PubMed]
Corwin RL ။ ကြွက်များတွင်ကန့်သတ် access ကိုအားဖြင့်သွေးဆောင် Bing-type အမျိုးအစားစားယခင်နေ့၌စွမ်းအင်ကန့်သတ်မလိုအပ်ပါဘူး။ အစာစားချင်စိတ်။ 2004; 42: 139-142 ။ [PubMed]
Corwin RL, Bing-type အမျိုးအစားစား၏ Buda-Levin အေအပြုအမူမော်ဒယ်များ။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2004; 82: 123-130 ။ [PubMed]
Corwin RL, ဆန် HB ။ Non-အစားအစာ-ဆုံးရှုံးကြွက်များတွင် optional ကိုရေနံသို့မဟုတ် sucrose စားသုံးမှုအပေါ် enterostatin ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1998; 65: 1-10 ။ [PubMed]
Corwin RL, ရော်ဘင်ဆင် JK, Crawley ဖြစ်မှု။ Galanin ကြွက်များ၏ hypothalamus နှင့် amygdala အတွက်လုပ်ကွက် galanin-သွေးဆောင်နို့တိုက်ကျွေးရေး antagonists ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 1993; 5: 1528-1533 ။ [PubMed]
Corwin RL, ရိုဝီကလေး, Crawley ဖြစ်မှု။ Galanin နှင့် galanin ရန် M40 ကြွက်များတွင်အဆီ-Chow ရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်းအတွက်အဆီစားသုံးမှုမပြောင်းကြဘူး။ အမေရိကန်ဇီဝကမ္မဗေဒ၏ဂျာနယ် (စည်းမျဉ်း Integrated နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဇီဝကမ္မဗေဒ) 1995; 269: R511-R518 ။ [PubMed]
Corwin RL, Wojnicki FHE, Fisher က Jo, Dimitri စင်ကာပူဒေါ်လာ, ဆန် HB, Young ကနေ MA ။ တစ်ဦးဓါတ်အဆီ option ကိုကန့်သတ် access ကိုအထီးကြွက်များတွင်စားသုံးမိအပြုအမူသော်လည်းမခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုသာသက်ရောက်သည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1998; 65: 545-553 ။ [PubMed]
ဝမ်းကွဲက MS, Roberts သည် DCS, က de ကျေးအိပ်ချ်ဂါဘမြို့သားB မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ကုသမှုများအတွက်အဲဒီ receptor agonists: မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 2002; 65: 209-220 ။ [PubMed]
က de Lima က MS, ပျံဝဲ BGDO, Reisser AAP, ကိုကင်းမှီခို၏ Farrell အမ် Pharmacological ကုသမှု: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ စွဲလမ်း။ 2002; 97: 931-949 ။ [PubMed]
DeSousa NJ, ဘုရ်ှက DEA, Vaccarino FJ ။ သွေးကြောသွင်းစိတ်ကြွဆေး၏ self-အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များတွင် sucrose နို့တိုက်ကျွေးရေးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုများကခန့်မှန်းထားသည်။ Psychopharmacology ။ 2000; 148: 52-58 ။ [PubMed]
အပြုအမူနှင့်စွဲလမ်းအတွက် Differential အခန်းကဏ္ဍ: di Chiara G. အနျူကလိယ shell ကိုနှင့်အဓိက dopamine accumbens ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2002; 137: 75-114 ။ [PubMed]
Dimitri စင်ကာပူဒေါ်လာ, ဆန် HB, Corwin RL ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်တစ်ဦးအဆီ option ကိုကန့်သတ် access ကိုသက်ရောက်မှု။ စား Disorders အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 2000; 28: 436-445 ။ [PubMed]
DSM-IV ™ Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏စာရင်းအင်းကို manual ။ 4th ed ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: American Psychiatric Association; 1994 ။
Ebenezer IS ။ baclofen ၏ Intraperitoneal အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များတွင်အစိုင်အခဲနှင့်အရည်နှစ်ဦးစလုံးအစားအစာစားသုံးမှုတိုးပွားစေပါသည်။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 1995; 273: 183-185 ။ [PubMed]
ပဲ့တင်သံဂျာ Lamonte N ကို, Ackerman TF, Bodnar RJ ။ ဂါဘမြို့သားများနှင့်ကြွက်များ၏ ventral tegmental ဒေသတွင်းသို့အုပ်ချုပ်ခွင့် opioid agonists နှင့်ရန်သဖြင့်ရူးနှမ်းအစားအစာစားသုံးမှုအတွက် ALTER ။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2002; 76: 107-116 ။ [PubMed]
Engwall: D, Hunter R ကို, Steinberg အမ်လောင်းကစားများနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းခွဲများပေါ်ရှိအခြားအန္တရာယ်အပြုအမူ။ အမေရိကန်ကောလိပ်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်။ 2004; 52: 245-255 ။ [PubMed]
Erlanson-Albertsson ကို C, York မြို့ဃ Enterostatin-တစ်ဦးအဆီစားသုံးမှုကိုထိန်းညှိ peptide ။ အဝလွန်ခြင်းသုတေသန။ 1997; 5: 360-372 ။ [PubMed]
Fattore L ကို, Cossu, G, Martellotta MC, Fratta ဒဗလျူ Baclofen ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်နီကိုတင်း၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး antagonizes ။ အရက်နှင့်အရက်။ 2002; 37: 495-498 ။ [PubMed]
Fisher က Jo, Birch ll ။ အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်သားသမီးရဲ့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု, အစားအစာရွေးချယ်ရေးနှင့်စားသုံးမှုသက်ရောက်သည်။ လက်တွေ့အာဟာရ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1999; 69: 1264-1272 ။ [PubMed]
Gosnell BA ဘွဲ့။ Sucrose စားသုံးမှုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူ၏နှုန်းမှာခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Psychopharmacology ။ 2000; 149: 286-292 ။ [PubMed]
Grigson ဆာ။ ဘုံယန္တရားများအားဖြင့် modulated သီးခြားဆုလာဘ်: ချောကလက်အဘို့အမူးယစ်ဆေးဝါးများလိုပဲ? ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2002; 76: 389-395 ။ [PubMed]
Guertin TL ။ bulimics, Self-ဖော်ထုတ်မူးရူးစားနှင့် Non-စား-disorders တစ်ဦးချင်းစီ၏အပြုအမူအစာစားခြင်း: အဘယျသို့သောဤလူဦးရေခွဲခြား? လက်တွေ့စိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1999; 19: 1-23 ။ [PubMed]
Hadigan CM, Kissileff HR, Walsh BT ။ bulimia နှင့်အတူအမျိုးသမီးအစားအစာများစဉ်အတွင်းအစားအစာရွေးချယ်ရေးပုံစံများ။ လက်တွေ့အာဟာရ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1989; 50: 759-766 ။ [PubMed]
Hagan MM, မော့စ် DE ။ bulimia nervosa ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်: ဖြစ်စဉ်များအစာရှောင်ဖို့ Opioid sensitivity ကို။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1991; 39: 421-422 ။ [PubMed]
Halmi Ka, Agras WS, Mitchell က J ကို, Wilson က GT ကို, Crow အဘိဓါန် S က, Bryson SW, et al ။ သိမြင်မှုအမူအကျင့်ကုထုံးမှတဆင့် abstinence အောင်မြင်သူကို bulimia nervosa နှင့်အတူလူနာ Relapse ခန့်မှန်း။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 2002; 59: 1105-1109 ။ [PubMed]
Herzog DB, Keller ကို MB, အိတ်ရော်ဘာ, Yeh CJ, Lavori PW ။ ကုသမှု-ရှာကြံလာဖို့နဲ့ bulimics အတွက်စိတ်ရောဂါ comorbidity ။ ကလေးအမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 1992; 31: 810-818 ။ [PubMed]
Higgs S ကိုဦးဘာဘာ DJ သမား။ လေယာဉ်ပြေးလမ်းအတွက်ဆန်းစစ်အပြုအမူနို့တိုက်ကျွေးမှုအပေါ် baclofen ၏ဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology နှင့်ဟားဗတ်အတွက်တိုးတက်မှုကို။ 2004; 28: 405-408 ။ [PubMed]
Janak PH သည်, Gill TM အလိုအလျောက်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းရရှိနိုင် sucrose နှင့်မပါဘဲအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်တိုက်ရိုက် GABAergic agonists နှင့်အတူ allopregnanolone ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ အရက်။ 2003; 30: 1-7 ။ [PubMed]
ဂျွန်ဆင် JG, Spitzer RL, Williams က JBW, ရွန်ကီ K ကို Linzer M က, Brody: D, et al ။ စိတ်ရောဂါ comorbidity, ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းနှင့်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုလူနာအတွက်အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုသူနဲ့ဆက်စပ် functional ဖြစ်စေချွတ်ယွင်း: အချုပ် MD-1000 လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ။ ခုနှစ်တွင်: Marlatt GA, VandenBos ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, အယ်ဒီတာများ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံး; 1997 ။
ကိုက်လန် EF ။ bulimia အတွက်မူးရူးစား၏ Macronutrient ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1990; 48: 837-840 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများသက်ဆိုင်သော: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်၏ neuroscience ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2002; 22: 3306-3311 ။ [PubMed]
Kreek MJ, LaForge SK ကို, စွဲလမ်း၏ Butelman အီး Pharmacotherapy ။ သဘာဝတရားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ မူးယစ်ဆေး Discovery ။ 2002; 1: 710-726 ။ [PubMed]
Kyrkouli S ကိုစတန်လေ BG, Seirafi RD, Leibowitz SF ။ Anatomical ပြည်တွင်းနှင့်ဦးနှောက်၌ဤ peptide ရဲ့သက်ရောက်မှု၏အမူအကျင့်တိကျတဲ့: galanin အားဖြင့်နို့တိုက်ကျွေးရေး၏ stimulation ။ Peptides ။ 1990; 11: 995-1001 ။ [PubMed]
Laessle RG, Wittchen Hu, Fichter MM, Pirke KM ။ bulimia နှင့် anorexia nervosa ၏သိသာထင်ရှားသောလူမျိုးကွဲ: စိတ်ရောဂါမမှန်၏တစ်သက်တာအကြိမ်ရေ။ စား Disorders အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 1989; 8: 569-574 ။
Leibowitz SF, exogenous galanin နှင့်အဆီစားသုံးမိ၏သဘာဝအအီတလီတို့အပေါ်တစ်ဦး galanin ရန်၏ကင်မ်တီသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1992; 599: 148-152 ။ [PubMed]
Marcus MD, Kalarchian MA ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အစာစားခြင်း Bing ။ စား Disorders အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 2003; 34 (ပျော့ပျောင်း): S47-S57 ။ [PubMed]
Minano FJ, Meneres Sancho က MS, Sancibrian M က, Salinas P ကို, Myers RD ။ အဆိုပါ amygdala အတွက်ဂိဗာမွို့ receptors: အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဝကြွက်များတွင်နို့တိုက်ကျွေးရေးအတွက်အခန်းက္ပ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1992; 586: 104-110 ။ [PubMed]
Ranaldi R ကို, Poeggel K. Baclofen ကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ Neuroreport ။ 2002; 13: 1107-1110 ။ [PubMed]
ဆန် HB, Corwin RL ။ Intracerebroventricular enterostatin Non-အစားအစာဆုံးရှုံးကြွက်များတွင်အစားအစာစားသုံးမှုကိုလှုံ့ဆျော။ Peptides ။ 1996; 17: 885-888 ။ [PubMed]
ဆန် HB, Corwin RL ။ Non-အစားအစာ-ဆုံးရှုံးကြွက်များတွင် optional ကိုအစားအစာစားသုံးမှုအပေါ် enterostatin ၏ဆိုးကျိုးများ။ အဝလွန်ခြင်းသုတေသန။ 1998; 6: 54-61 ။ [PubMed]
ရို JC, Leitenberg H ကို, စုစုပေါင်း J ကို, bulimia nervosa အတွက် Willmuth အမ် Bing စားဖြစ်စဉ်များ: အစားအစာပမာဏနှင့်အမျိုးအစားကိုလောင်လေ၏။ စား Disorders အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 1986; 5: 255-267 ။
ဘေးကင်း DL, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတီဂျေ, Telch CF, Agras WS ။ မူးရူးစားရောဂါများအတွက်အောင်မြင်သောစကားအပြုအမူကုထုံးအောက်ပါ relapse ၏ခန့်မှန်း။ စား Disorders အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 2002; 32: 155-163 ။ [PubMed]
Schroeder, Binzak JM, ကယ်လီ AE BE ။ nicotine- ထိတွေ့သို့မဟုတ်ချောကလက်-ဆက်စပ် Contextual တွေကိုအောက်ပါ prefrontal cortical activation တစ်ဘုံပရိုဖိုင်း။ neuroscience ။ 2001; 105: 535-545 ။ [PubMed]
Shoptaw တစ်ဦးက, ယန်က X, et al Rotheram-Fuller EJ, Hsieh က YC, Kintaudi ကို PC, Charuvastra VC ကို။ ကိုကင်းသုံးစွဲမှုနာတာရှည်ပုံစံများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အပဏာမသက်ရောက်မှု: ကင်းမှီခိုဘို့ baclofen ၏ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး randomized ။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2003; 64: 1440-1448 ။ [PubMed]
Spangler R ကို, Wittkowski KM, Goddard NL, Avena မိုင်, Hoebel BG, Leibowitz SF ။ ကြွက်ဦးနှောက်၏ဆုလာဘ်ဒေသများရှိမျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်သကြား Opiate ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ မော်လီကျူးဦးနှောက်သုတေသန။ 2004; 124: 134-142 ။ [PubMed]
Stratford TR, ကယ်လီ AE ။ နျူကလီးယပ်အတွက်ဂါဘမြို့သား shell ကိုနို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူ၏ဗဟိုစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင် accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1997; 17: 4434-4440 ။ [PubMed]
သောမတ်စ် MA, ဆန် HB, Weinstock: D, Corwin RL ။ ကြွက်များတွင်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်အိုမင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2002; 76: 487-500 ။ [PubMed]
ရပ်ကွက် bo, Somerville EM, Clifton PG ။ baclofen ရွေးချယ်ကြွက်များတွင်အပြုအမူနို့တိုက်ကျွေးမှုပိုကောင်းစေပါတယ် Intraaccumbens ။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2000; 68: 463-468 ။ [PubMed]
Wiederman မဂ္ဂါဝပ်, အစာစားခြင်းမမှန်မှုများနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အကြား Pryor တီပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 1996; 21: 269-272 ။ [PubMed]
Wilson က GT ကို။ Bing စားခြင်းနှင့်စွဲလမ်းပုံမမှန်။ ခုနှစ်တွင်: Fairburn CG, Wilson က GT ကို, အယ်ဒီတာများ။ Bing စား: သဘာဝတရား, အကဲဖြတ်များနှင့်ဆက်ဆံမှု။ နယူးယောက်: အဆိုပါ Guilford စာနယ်ဇင်း; 1993 ။ စစ။ 97-120 ။
Wirtshafter: D, Stratford TR, Pitzer MR ။ အဆိုပါပျမ်းမျှ raphe နျူကလိယအတွင်းဂါဘမြို့သား-B က receptors ၏ဆွကထုတ်လုပ်သည့်အမူအကျင့်ကို Activation အပေါ်လေ့လာရေး။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 1993; 59: 83-93 ။ [PubMed]
Zhu AJ, Walsh BT ။ မမှန်စားသုံးခြင်း၏ Pharmacologic ကုသမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ကနေဒါဂျာနယ်။ 2002; 47: 227-234 ။ [PubMed]
Znamensky V ကို,: Echo ဂျာ Lamonte N ကို, ခရစ်ယာန်, G, Ragnauth တစ်ဦးက, Bodnar RJ ။ Gamma-aminobutyric အက်ဆစ်အဲဒီ receptor မျိုးကွဲရန် differential ကြွက်များအတွင်းနျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုဒေသတွင်း၌ opioid-သွေးဆောင်နို့တိုက်ကျွေးရေးပြောင်းလဲပစ်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 2001; 906: 84-91 ။ [PubMed]